I-l0vetodream ithi iMac entsha iya kuba nkulu ngakumbi kunale ikhoyo | Ndisuka mac
Xa kuncinci okuseleyo ukubona umsitho weApple kwaye uyazi ukuba inkampani izakusizisela ntoni kwikamva elifutshane, amahemuhemu aqala ngento esinokuyibona. Umhlalutyi u-l0vetodream uxele ukuba iMac elandelayo kunye nehemuhemu eza kumiliselwa iya kuba yikhompyuter eyona inkulu esiyibonileyo ukuza kuthi ga ngoku. Enkulu kuneyangoku imodeli ye-27-intshi ekhoyo.
Njengoko sinokufunda kuvavanyo olukhethekileyo 9to5Mac, umhlalutyi l0vetodream ngeakhawunti yakho yenethiwekhi yoluntu ye-Twitter Utshilo ukuba iApple ikulungele ukwazisa iMac entsha ngeApple Silicon kwihlabathi. Iindaba ezimnandi zezokuba le khompyuter intsha iya kuba nesona sikrini sikhulu sakha sakho. Iya kuba nkulu kune-27 intshi esele ikho. Kucingelwa ukuba sondeza ukuya kwii-intshi ezingama-32. Sele siyazi ukuba iApple ngoku ithengisa iiMacs ngobukhulu obubini: imodeli ye-21,5-intshi kunye nemodeli ye-27-intshi.
Amarhe malunga neMac entsha ayalumkisa ukuba iya kuba noluhlengahlengiso olukhulu, njengoko Uyilo lwangoku lwe-iMac lwasemva kweminyaka phantse esibhozo ngee-bezels ezinkulu kakhulu kunye ne-chassis ye-beveled. Kulindeleke ukuba ube nobuhle be-iPad Pro 2018 nge-bezels ezincitshisiweyo kunye namacala acabagcayo. NgoJanuwari, uBloomberg wathi iMac iya kujongeka ifana nePro Display XDR.
Kucacile ukuba kufuneka sibone a iMac entsha eneApple Silicon iza kungekudala. Ngakumbi ngakumbi emva kokuba inkampani yaseMelika igqibe susa iMac Pro kwintengiso. Ke, ukuhlangabezana neemfuno zikaTim Cook zokuqinisekisa ukuba zonke iikhompyuter ze-Apple sele zinayo i-chip entsha yenkampani.
Ngoku, asazi ukuba amarhe kunye noqikelelo lwe-l0vetodream luya kuzalisekiswa. Lixesha kuphela eliza kusixelela ukuba uqikelelo lwakho luyinyani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-l0vetodream ibanga ukuba iMac entsha iya kuba nkulu ngakumbi kunale ikhoyo ngoku